Isibane setafile kunye ne-10m ye-LED strip ehambelana neMeross HomeKit | Ndisuka mac
Kubo bonke abo bangayazi i-firm, singatsho ukuba yinkampani eneemveliso ezininzi ezihambelana neKhayaKit. Ngeli thuba sizamile isibini seemveliso zenkampani Umtya we-MSL 320 we-LED kunye nesibane setafile se-MSL 430.
Zombini ezi mveliso ziyahambelana ngokufanelekileyo neKhayaKit, iAmazon Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, kodwa eyona nto inomdla kuthi yiKhayaKit. Zombini ezi zixhobo zibonelela umgangatho olungileyo wezinto kunye nexabiso elifikelelekayo ngokweneneKungenxa yoko le nto i-meross ithatha "ugqatso" ngaphakathi kwezixhobo zeKhayaKit, njengoko ezi mveliso zihlala zibiza kakhulu.
1 I-MSL 320 ye-LED strip 5 m ubude ezimbini
1.1 Indibano ye-Meross ye-strip
1.2 Qhagamshela kwi-Apple HomeKit
2 Ukukhanya kwetafile MSL 430
2.1 Ukucwangciswa kwesibane seMeross MSL 430
2.2 Uyilo kunye nomgangatho wezinto kwiimveliso ezigqwesileyo
3 Ixabiso le-MSL 320 ye-strip ye-LED kunye nesibane se-MSL 430
I-MSL 320 ye-LED strip 5 m ubude ezimbini
Kule meko siza kuqala ngomtya we-LED. Le ineendlela ezininzi zokunyusa ezizayo yahlulahlulwe yaba yimisongo emibini yeemitha ezi-5 ubude nganye kwaye inikezela ngamathuba okuhombisa okanye ukukhanyisa naliphi na igumbi kuba amandla ezi LEDs ebalasele kakhulu.
Kwimeko yethu sibeke umcu we-5 m nje emva kweTV kwaye ekuphela kwento enokuthi sinokuthi lo malumekazi we-LED une-10 m ke kuya kuxhomekeka kwisithuba ekufuneka usongeze esipheleleyo okanye hayi. Songeze Icandelo le-5m kwaye inyani kukuba isebenza kakuhle kakhulu Inemibala eyahlukeneyo enika umsebenzisi ithuba lokulawula ukucima kunye nokucima ngeKhayaKit, ukuyenza ukuba ibe ntle.
Yiya apha i-MSL 320 ye-strip ye-LED enemigca emibini ye-5 m inye.
Indibano ye-Meross ye-strip
Kulula ukuyifaka le strip ye-LED kwaye ukongeza ezinye izinto ezine-3M yesimbo sokubambelela esinayo sinokuncamathisela naphi na. Umtya we-LED ubotshelelwe kolu hlobo lokutya njengoko sinokuthi silungelelanise ukuphuma kwamandla naphina enkosi kwi-tape yokuncamathela.
Nje ukuba iadaptha yamandla ixhunyiwe, kufuneka siqhubeke nokufaka apho sifuna ukukhanya khona, kulula kwaye kulula ngenxa yesixa sokutya okongeziweyo. Into embi ngale ndlela kukuba ukujikajika njengoko kusenzeka kuninzi lweziqwengana ze-LED kwimarike, kuya kuba kukugotywa okuthile. Oku kuqhelekile kwaye Ayichaphazeli ukusebenza komcu we-LED konke konke.
Ndiyakutshata, olona loncedo kukuba sinokufikelela kwi-10m yomtya we-LED ke sinokukhanyisa amagumbi amakhulu kwaye siwalawule ngeKhayaKit. Esi sisibane esingangqalanga kwaye ke sukulindela ukuba sifane nebhalbhu yokukhanyisa.
Iinkcukacha ezibalulekileyo kule meko kukuba umcu unokunqunyulwa kwaye kusetyenziswe isinxibelelanisi esisifumana kwiadaptha ukuze sincamathisele imicu emibini yokukhanya ukuze sikwazi ukudibanisa imitya yomibini ngokuthe tye. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukulungisa iziqwengana zongezwa eludongeni okanye naphina kwaye kwisilawuli sinokudibanisa umtya ngokwahlukeneyo okanye kabini njengoko inezinto ezimbini zonxibelelwano.
Qhagamshela kwi-Apple HomeKit
Kuyafana nezinye izixhobo kufuneka uqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi ye-2,4 GHz Ngaphandle koko awuyi kuba nakho ukuqhagamshela neKhayaKit. Nje ukuba sidityaniswe sinokwenza ubumbeko ngokunqakraza kwisicelo sekhaya seMac okanye i-iPhone yethu kwaye kube kanye ngaphakathi ngokucofa uphawu +.
Emva koko sinokulula Skena ikhowudi ye-QR eprintwe kwisixhobo Ukuqhagamshela kwemichilo ye-LED okanye kwiphepha elongezwe ngaphakathi kuyo, khumbula ukuba inophawu lwendlu kunye nenombolo xa ingayiboni ikhamera okanye kuya kufuneka uyenze kwi-Mac ngesandla ngokufaka amanani ikhibhodi. Ilula ngokwenene, awuyi kuba nangxaki nayo xa sele iqulunqwe ngeKhayaKit onokusebenzisa iSiri ukwenza kungasebenzi, yongeza ukuzenzekelayo nokucima nangaphezulu.
Ukukhanya kwetafile MSL 430
Kwelinye icala sinokukhanya kwitafile ye-MSL 430. Kusengqiqweni kwakhona iyahambelana neKhayaKit, i-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, ke ngekhe sibe nangxaki kule meko yokulawula isibane.
Uyilo lwesi sibane silula, luhle kwaye luyasebenza, ukusetyenziswa kwesibane ngesandla kulula yongeza iqhosha phezulu esinokuvula okanye ukucima isibane ngesandla nyusa okanye wehlise ukukhanya kokuqaqamba kwaye wenze ukuseta kwakhona xa kukho iingxaki.
Ukucwangciswa kwesibane seMeross MSL 430
Ukwenza ubumbeko lwe-Wi-Fi yesibane, kufuneka uqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-2.4 GHZ ye-Wi-Fi, njengakwisiqwenga se-LED, kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe i-iOS 13 okanye ngaphezulu ukufakela kwiKhayaKit kunye nokongeza isixhobo kwisicelo sethu sasekhaya faka isicelo seKhaya kwi-Mac yethu, i-iPhone okanye i-iPad kwaye ucofe uphawu +.
Nje ukuba singaphakathi sinokuskena ngokulula ikhowudi ye-QR eza kumaphepha esibane okanye kwisibane uqobo kwaye, kwimeko yeMac, chwetheza ikhowudi yamanani eyongezayo. Nje ukuba eli nyathelo lenziwe, sinokulawula ngoSiri ukucima nokucima isibane kunye nenkqubo yokuyilayita ngokuzenzekelayo ngeentsuku ezithile okanye iiyure.
Uyilo kunye nomgangatho wezinto kwiimveliso ezigqwesileyo
Singatsho ukuba esi sibane sinoyilo olufana nolunye esele lufunyenwe kwimarike ngaphambili, kodwa longeza uhlobo umkhuseli weplastikhi ongaphandle oko kwenza ukuba isibane sikhangeleke ngokwenyani nakweliphi na igumbi.
Ngokusengqiqweni, kuyilo, umntu ngamnye wahlukile, kodwa ngokobuqu ndiyaluthanda olu hlobo lwesibane segumbi elinjengegumbi lokulala okanye idesika apho sifuna ukuba nesibane esingangqalanga ekulula ukusisebenzisa, esinokucwangciswa nesilungileyo uyilo. Yongeza Iqhosha lesinyithi elingaphezulu ukulawula ukukhanya nokucinywa kwesibane alingqubani ngokwe kuyilo kwaye yenza ukuba iseti ibonakale intle naphi na.
Ndifumana imveliso inomdla kubasebenzisi abafuna Ngena kwiimveliso ezihambelana neKhayaKit, okoko umgangatho wezinto, ukhuseleko kunye namaxabiso anazo ezi mveliso zinomdla ngokwenene zinomdla.
Ixabiso leStrip I-MSL 320 ye-LED kunye nesibane se-MSL 430
Kule meko ixabiso labo bobabini liqinile. Gcina ukhumbula ukuba kunjalo Izibane eziKhaya ezihambelanayo ke oku kubonelela ngokudibanisa kubasebenzisi. I-MSL 320 ye-strip ye-LED encinci enemigca emibini ye-5 m nganye ngaphakathi inexabiso le-49,99 euro.
Kwelinye icala sine isibane setafile esingaphantsi kwe-MSL 430 ngexabiso lama-euro angama-43,49. Kule meko sikwacebisa ukuba sinike ingqalelo inqaku ukusukela siqhubeka sincokola nemeross yokongeza isaphulelo kubafundi be-mac. Siza kuba neendaba ngayo kungekudala kwaye siza kuyilungisa inqaku.
Umtya we-MSL 320 we-LED kunye nesibane se-MSL 430
Ukufakelwa ngokukuko kunye neziqeshana kumtya we-LED
Ixabiso elifanelekileyo kakhulu lemali
Ifuna unxibelelwano lwe-WiFi ye-2.4 GHz
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Isibane setafile kunye ne-10m ye-LED strip ehambelana neMeross HomeKit
U-Apple ubhengeza umhla wokukhutshwa kwefilimu i-CODA, ophumelele amabhaso ama-4 eSundance